ဘိုးအင်း B-52H CONECT အထုပ် DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 36.5 ကို MB
downloads ရယူရန္ 12 809
AlphaSim, ဒါဝိဒ်သည် Robles အားဖြင့် update ကိုအားဖြင့်မော်ဒယ်
ဒါကဖြစ်ပါသည် FSX/P3D သာပြောင်းလဲခြင်းနှင့် FS2004 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ မူရင်းမော်ဒယ် FS2004 များအတွက် AlphaSim, Ltd အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး။ ဒါဝိဒ်သည် Robles အားဖြင့် CONECT စီးရီး B-52H မှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်။
ဤသည်လေယာဉ်တင်ပေါ်စမျးသပျခံခဲ့ရ FSX Acceleration နှင့်အတူရွှေစင်, Prepar3Dv2.5 နှင့် Prepar3Dv3 ။ တွဲဖက်မ P3D v4 +
အဆိုပါ CONECT ပလက်ဖောင်းကိုမစစ်မှန်သောသမိုင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အသစ်ဖြစ်၏နှောင်းပိုင်း 2014 စောစော 2015 အတွက်ဝန်ဆောင်မှုသို့ ဝင်. ဆဲ updated လျက်ရှိသည်:
B-52s အခါအားလျော်စွာထိုကဲ့သို့သော Tinker လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း, ဥက္ကလာဟိုးမားအဖြစ် USAF ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု Depot မှာ refurbished ကြသည်။ အဆိုပါရိုက်ကူးပထမဦးဆုံးက B-2045 ဝန်ဆောင်မှုသို့ဝင်နီးပါး 90 နှစ်ကြာအနည်းဆုံး 52 သည်အထိဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဆက်လက်ရှိနေရန်မျှော်လင့်ရသည်။ ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်များကန့်သတ်ထားဘူးသောလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ဆန့်ကျင်စစ်အေးတိုက်ပွဲ၏အဆုံးကတည်းကကောက်ယူခဲ့ကြကြောင်းမစ်ရှင်အမျိုးအစားအတွက်ထိရောက်သောနှင့်ချွေတာလေးလံသောဗုံးခွဲသူနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါ USAF B-52 အပေါ်မှီခိုအားထားနေဆဲဖြစ်သည်။ B-52 စစ်မြေပြင်ကိုကျော် (သို့မဟုတ်ပင်ကောင်းစွာပြင်ပ) တိုးချဲ့ကာလအဘို့ loiter ဖို့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်, နှင့်တိကျစွာနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့တိုက်ရိုက်မီးခဲယမ်းကယ်နှုတ်။ ဒါဟာအားလုံးမကြာသေးခင်ကပဋိပက္ခတွေအတွင်းမှာမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထောက်ပံ့အတွက်တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုခဲ့သည်။ ဘိုးအင်းသည်လက်ရှိတွင် 2013 ရှစ်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်တင်လက်ရှိတွင်ဧပြီလ 2014 အားဖြင့်ပြီးစီးစေမည်အကြောင်း, အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်လျှက်ရှိသည်။ 10 နောက်ထပ်ပစ္စည်းများ 2014 နှင့် 2015 အတွက် delievered လိမ့်မည်။
ဇူလိုင်လ 2013 ခုနှစ်, လေတပ်က၎င်း၏က B-52 ဗုံးကြဲလေယာဉ်၏တစ်စင်းကို-ကျယ်ပြန့်နည်းပညာဆိုင်ရာအဆင့်မြှင့်စတင်ခဲ့အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ, ကွန်ပျူတာ, ကိရိယာ, လေယာဉ်ကုန်းပတ်ပေါ်တွင်ရေးကိရိယာများအားခေတ်မီဖို့ Combat ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (CONECT) ကိုခေါ်။ , CONECT အဆင့်မြှင့်ထိုကဲ့သို့သောသင်္ဘောသားအသစ်ဆာဗာများ, modems, ရေဒီယို, ဒေတာ-လင့်များ, အသံဖမ်း, ဒစ်ဂျစ်တယ် flightdeck နှင့်စက်အဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲပါဝင်သည်။
တစ်ခုမှာအပိုင်းအစနှင့်အတူအချက်အလက်များ၏ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းအဘို့အခွင့်ထက်ကျော်လွန်-line-of-မျက်မှောက် software ကိုသည် Programmable စကားသံကိုထုတ်လွှင့်နိုင်ရေဒီယို, ဒေတာနှင့် B-210s နှင့်မြေပြင်ကွပ်ကဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများအကြား In-ပျံသန်းသတင်းအချက်အလက်များ ARC-52 Warrior ဖြစ်ပါသည် updated ထောက်လှမ်းရေး, မြေပုံ, ဒါမှမဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ပစ်မှတ်ထား; အ ARC-210 B-52 ခရီးသွားလာသောအခါပစ်မှတ်နေရာများကိုပြောင်းလဲပြီစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်ရှည်ခံနိုင်ရည်မစ်ရှင်အပေါ်အသုံးဝင်သော, အချက်အလက်များ၏စက်-to-စက်လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုနေစဉ်, သြဒီနိတ်ချကူးယူလိုအပ်ယခင် In-ပျံသန်းပစ်မှတ်အပြောင်းအလဲများကို။ အဆိုပါလေယာဉ်တင် Link ကို-16 မှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များခံယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ CONECT အဆင့်မြှင့်ခြုံငုံ $ 1.1 ဘီလျံအထိကုန်ကျနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာယူပါလိမ့်မယ်။ ရန်ပုံငွေရှာခြင်း 30 B-52s နှင့်လေတပ်များအတွက်လုံခြုံပြီတစ်နှစ်လျှင် 10 CONECT အဆင့်မြှင့်တင်ဘို့မျှော်လင့်ပေမယ့်နှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ လက်နက်အဆင့်မြှင့်တင်လက်နက်တွေ payload တိုးမြှင့်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ် interface နဲ့ rotary launcher ကို အသုံးပြု. ရထားစွမ်းရည်အတွက် 1760 ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသောအ 66 ပြည်တွင်းလက်နက်များဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Upgrade (IWBU), ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ IWBU အားထုတ်မှုအကြမ်းဖျင်း $ 313 သန်းကုန်ကျမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ အဆိုပါ 1760 IWBU B-52 နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး-158B JASSM-ER နဲ့ ADM-160C MALD သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အားလုံး 1760 IWBUs အောက်တိုဘာလ 2017 အားဖြင့်အွန်လိုင်းဖြစ်သင့်သည်။
52 လက်နက်များတင်ဆောင်သုံး B-36s ဆန့်ကျင်သည့်အတိုင်းနှစ်ခုကိုဗုံးကြဲလေယာဉ်တစ်မစ်ရှင်အတွက်လိုအပ်သောလောင်စာ၏အမှုထမ်းများနှင့်ပမာဏ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချ, 40 လက်နက်များသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်, နှင့်အတူတူပင်အရေအတွက်နှင့်အတူပစ်မှတ်အပေါ်ပိုပြီးလက်နက်တွေချပြီး၏ထို option ကိုပေးထားတယ် လေယာဉ်၏။  အဆိုပါ 1760 IWBU တိကျပဲ့ထိန်းလက်နက် B-52 သယ်များနှင့်တောင်ပံ hardpoints အပေါ်ပြင်ပမှသယ်ဆောင်ခံရဖို့ပဲ့ထိန်းဗုံးများဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလျှော့ချနိုင်ပဲ့ထိန်းလက်နက်၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ခြင်း, လက်နက်ပင်လယ်အော်အတွင်းမှချထားခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအဆင့်နောက်ပိုင်းမှာအဆင့်အ JASSM နှင့်ဒုံးကျည်၏ MALD မိသားစုအလိုက်အနှင့်အတူ 52 24 ပေါင် JDAMs သို့မဟုတ် 500 20 ပေါင် JDAMs သယ်ဆောင်ရန် B-2,000 ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ လျော့နည်းဆွဲနေတဲ့ 15 ရာခိုင်နှုန်းကိုလောင်စာချွေတာခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်အကွာအဝေးအတွင်းအတောင်ပံရလဒ်များကိုမှပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းသူတို့ကိုရွေ့လျားပိုပြီးစမတ်ဗုံးသယ်များအပြင်၌။ ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်များကန့်သတ်ထားဘူးသောလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ဆန့်ကျင်စစ်အေးတိုက်ပွဲ၏အဆုံးကတည်းကကောက်ယူခဲ့ကြကြောင်းမစ်ရှင်အမျိုးအစားအတွက်ထိရောက်သောနှင့်ချွေတာလေးလံသောဗုံးခွဲသူနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါ USAF B-52 အပေါ်မှီခိုအားထားနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမယုံကြည်စိတ်ချရသောအစားထိုးရှိခဲ့သောကြောင့်, B-52 လည်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဆက်လက်သိရသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ, အ airframes ဆဲကြံ့ခိုင်သော်လည်း, အီလက်ထရွန်းနစ်စွမ်းရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဗုံးခွဲသူတစ်ဦးကျောက်ကိုအသက်အရွယ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတိုးတက်မှုများကိုအသီးအသီးသင်္ဘောသားအနေအထားနှင့်သင်္ဘောသားအဖွဲ့ဝင်များကဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်နည်းပညာကိုတပ်ဆင်ထားနားကြပ်ပေါ်အချင်းချင်းပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုတိုးမြှင့်စွမ်းရည်နဲ့ပေါင်းစပ်ဒစ်ဂျစ်တယ် interphone မှာစက်နှင့်အတူတစ် State-Of-The-Art ကွန်ပျူတာကွန်ယက်ကိုပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ $ 76 သန်း CONECT အဆင့်မြှင့်ဘိုးအင်းအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းနှင့် Tinker မှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပထမဦးဆုံး CONECT ပစ္စည်းများ၏အနိမ့်မှုနှုန်းကနဦးထုတ်လုပ်မှုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။
အဆိုပါပြီးနောက် Link ကိုကြည့်ရှုပါ:
1 ။ အားလုံးအသစ်ကသုတ်ဆေး။
2 ။ နယူးကွက်လပ်ဖုမြေပုံ
3 ။ အားလုံးသုတ်ဆေး DDS format နဲ့၌ရှိကြ၏။
4 ။ အကွိမျမြားစှာ Liveries ။
5 ။ နယူးလေကြောင်းရန် configuration file ကို။
6 ။ နယူး HD ကို VC ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
7. FSX Air ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း installed ။
8 ။ ကင်မရာအမြင်များဆက်ပြောသည်။
9 ။ VC ကိုမော်ဒယ်နှင့်အတူင့်လင်းမြင်သာပြဿနာဖြေရှင်း။
10 ။ အားလုံးအသစ်ကဒစ်ဂျစ်တယ်ယာဉ်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။
11 ။ FSX coded gauge နဲ့ခွဲပြား
12 ။ default နှင့်ထုံးစံ GPS စနစ်
13 ။ အလုပ်အဖွဲ့ယာဉ်အသွားအလာ Radar
Author: AlphaSim, ဒါဝိဒ်သည် Robles အားဖြင့် update ကိုအားဖြင့်မော်ဒယ်